Passive DWDM Vagadziri | China Passive DWDM Fekitori & Vatengesi
HUA-NET inopa yakazara yakazara Thermal / Athermal AWG zvigadzirwa, zvinosanganisira 50GHz, 100GHz uye 200GHz Thermal / Athermal AWG. Pano isu tinopa iyo generic tsananguro yeiyo 41-chiteshi 100GHz Gaussian Athermal AWG (41 chiteshi AAWG) MUX / DEMUX chinhu chakapihwa kushandiswa muDWDM system.
Athermal AWG (AAWG) ine yakaenzana mashandiro kune yakajairwa Thermal AWG (TAWG) asi haidi simba remagetsi rekudzikamisa. Dzinogona kushandiswa sekutsiva kwakananga kweTin Film Filters (Filter mhando DWDM module) yemakesi pasina simba rinowanikwa, zvakare inokodzera kunyorera kwekunze pamusoro -30 kusvika + 70 degree mumasaini ekuwana. HUA-NET's Athermal AWG (AAWG) inopa yakanakisa oparesheni kuita, kuvimbika kwakanyanya, kureruka kwekubata fiber uye mhinduro yekuchengetedza simba mune compact package. Yakasiyana yekuisa uye yekubuditsa tambo, senge SM fibers, MM fibers uye PM fiber inogona kusarudzwa kusangana akasiyana maitiro. Tinogona zvakare kupa akasiyana zvigadzirwa mapakeji, kusanganisira yakasarudzika simbi bhokisi uye 19 ”1U rackmount.
Iyo planar DWDM zvikamu (Thermal / Athermal AWG) kubva kuHUA-NET vanonyatsogoneswa zvinoenderana neTelcordia kuvimbika kuvimbiswa zvinodiwa kune fiber optic uye opto-zvemagetsi zvikamu (GR-1221-CORE / UNC, Generic Reliability Assurance Zvinodikanwa zveFibre Optic Matavi Ezvinhu, uye Telcordia TR-NWT-000468, Kuvimbika Kwekusimbisa Maitiro eOpto-zvemagetsi Midziyo).
HUA-NET Dense wavelength kupatsanurwa multiplexer (DWDM) inoshandisa yakatetepa firimu yekumhanyisa tekinoroji uye dhizaini dhizaini isiri-flux metalbonding micro optics kurongedza kuti uwane Optical kuwedzera uye kudonhedza kuITUwavelengths. Iyo inopa ITU chiteshi pakati wavelength, yakaderera kupinza kurasikirwa, yakakwira chiteshi kusarudzika, yakafara kupfuura bhendi, yakaderera tembiricha senzwi uye epoxyfree optical nzira. Inogona kushandiswa wavelength yekuwedzera / kudonhedza mu telecommunicationnetwork system.
HUA-NET 200GHz dense wavelength kupatsanurwa multiplexer (DWDM) inoshandisa yakatetepa firimu yekumhanyisa tekinoroji uye dhizaini dhizaini yeasina-flux simbi inosunga micro optics kurongedza kuti uwane Optical kuwedzera uye kudonhedza kumaITU wavelengths. Iyo inopa ITU chiteshi pakati wavelength, yakaderera kupinza kurasikirwa, yakakwira chiteshi yekuzviparadzanisa, yakafara kupfuura bhendi, yakaderera tembiricha senzwi uye epoxy yemahara optical nzira. Iyo inogona kushandiswa kune wavelength yekuwedzera / kudonhedza mune telecommunication network system.
HUA-NET Dense wavelength kupatsanurwa multiplexer (DWDM) inoshandisa thinfilm yekumhanyisa tekinoroji uye dhizaini dhizaini yeasina-flux simbi yekubatanidza microoptics kupaka kuti uwane Optical kuwedzera uye kudonhedza paITU wavelengths. Iyo inopa ITU chiteshi chepakati wavelength, kuderera kwekuisa kurasikirwa, kukwirisa chiteshi, yakafara kupfuura bhendi, yakaderera tembiricha senzwi uye epoxy yemahara opticalpath. Iyo inogona kushandiswa kune wavelength yekuwedzera / kudonhedza mune telecommunication networkystem.
Xfp Transceiver, Optical Fiber Module, Huawei Qsfp +, Sfp C ++, Huawei Olt Mutengo, External Modulation Transmitter,